Ụzọ a na-ahụ maka okporo ụzọ dị elu nke okporo ụzọ China, okporo ụzọ ndị na-ere ahịa ọkụ ọkụ
Nkọwa:Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara,Ụzọ igwe elu nke elu okporo ụzọ Galvanized,Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ Akwa Awara Awara,Okporo Ụzọ Eji Awara Awara,,
Home > Ngwaahịa > Igwe ọkụ kachasị elu > Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara
Ngwaahịa nke Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara , Ụzọ igwe elu nke elu okporo ụzọ Galvanized suppliers / factory, wholesale high-quality products of Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ Akwa Awara Awara R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
200W Philips LED High Mast Light Na 110-120lm / w  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Dị Ike 600W Ọkụ Elu Elu Mast Elu 140lm / W  Kpọtụrụ ugbu a
Onye ọrụ ọrụ 500W LED High Driver Meanwell Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Na-acha ọkụ ọkụ Epistar3030 400W Igwe ọkụ dị elu nke elu igwe  Kpọtụrụ ugbu a
3000K-6500K IP66 300W LED Elu Mast Mbara  Kpọtụrụ ugbu a
Fọl White 250W LED High Mast Lighting Stadium  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom IP66 200W LED High Mast Light Ce & RoHS & ETL & TUV & SAA  Kpọtụrụ ugbu a
2018 Ọwa Mmiri Ọhụụ 150W Ọhụụ nke Square  Kpọtụrụ ugbu a
14000lm Na-enwu gbaa 3030 100W ọkụ ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
200W Philips LED High Mast Light Na 110-120lm / w
Ọnụahịa otu: USD 88.81 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 380 * 430 * 230MM
200W Philips LED High Mast Light Na 110-120lm / w Model NO.AD-HM-200W Wattage 200W Voltage AC 85-305V Luminance Flux 110-120lm/w THD <10% Life
Ike Dị Ike 600W Ọkụ Elu Elu Mast Elu 140lm / W
Ọnụahịa otu: USD 305.29 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 600 * 140 * 550MM NW: 14KG GW: 15.5KG
Ike Dị Ike 600W Ọkụ Eluigwe Mbadamba Mbadamba 140lm / W maka Stadium Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football...
Onye ọrụ ọrụ 500W LED High Driver Meanwell Driver
Ọnụahịa otu: USD 227.65 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 600 * 140 * 480MM NW: 12KG GW: 13.5KG
Onye ọrụ ọrụ 500W LED High Driver Meanwell Driver Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field Light. Site...
Na-acha ọkụ ọkụ Epistar3030 400W Igwe ọkụ dị elu nke elu igwe
Ọnụahịa otu: USD 194.12 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 600 * 140 * 400MM NW: 11KG GW: 12.5KG
Na-acha ọkụ ọkụ Epistar3030 400W Igwe ọkụ dị elu nke elu igwe Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field...
3000K-6500K IP66 300W LED Elu Mast Mbara
Ọnụahịa otu: USD 148.24 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 340 * 120 * 560MM NW: 8KG GW: 9KG
China 3000K-6500K IP66 300W LED Elu Mast Mbara Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field Light. Site na...
Fọl White 250W LED High Mast Lighting Stadium
Ọnụahịa otu: USD 111.18 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 340 * 120 * 480MM NW: 6.5KG GW: 7.5KG
Fọl White 250W Ọhụụ elu ọkụ ọkụ maka ebe nkiri Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field Light. Site na...
Aluminom IP66 200W LED High Mast Light Ce & RoHS & ETL & TUV & SAA
Ọnụahịa otu: USD 91.41 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 340 * 120 * 400MM NW: 5.5KG GW: 6.5KG
Aluminom IP66 200W LED High Mast Light na Ce & RoHS & ETL & TUV & SAA Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu...
2018 Ọwa Mmiri Ọhụụ 150W Ọhụụ nke Square
Ọnụahịa otu: USD 76.94 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 340 * 110 * 330MM NW: 4.5KG GW: 5KG
2018 New 150W Ọwara Osisi Ọwara Mmiri maka Square Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field Light. Site...
14000lm Na-enwu gbaa 3030 100W ọkụ ọkụ ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 59.29 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 340 * 110 * 250MM NW: 3.6KG GW: 4.1KG
14000lm Na-enwu gbaa 3030 100W ọkụ ọkụ ọkụ Nkọwa: Riyueguanghua Co., Nke kachasị elu na ike dị elu na-eduzi ọkụ maka ámá egwuregwu. Anyị na-enye 50-600w Elu ike LED Football Stadium Ìhè, ama egwuregwu floodlights, Football Field Light. Site na otu...
China Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara Ngwa
Igwe ọkụ dị elu dị nnọọ iche n'okike site n'okporo ụzọ ma ọ bụ ìhè okporo ụzọ. A na-etinye ihe mgbochi elu na mita 60 na ihe karịrị 100 ft n'elu ala ma mgbe ụfọdụ dị ka 250. A na-agbanye ọkụ ọkụ n'okporo ámá na elu dị elu karịa mita 60, ọtụtụ na-adịkwa na 30-ft.
Ngwa maka ọkụ ọkụ ọkụ na-agụnye nrụnye na ikuku ụgbọ njem, nnukwu ụlọ, ntanetụ ma ọ bụ nkwụnye nchekwa, na ngwa okporo ụzọ pụrụ iche. Okpokorita ndi ozo di na ya nwere ike ibudata ngwa ngwa, obu ezie na ichoputa uzo di elu n'etiti ndi obodo na mpaghara ndi ozo.
Ụzọ Oke Awara Awara Awara Awara Ụzọ igwe elu nke elu okporo ụzọ Galvanized Okporo Ụzọ Ịgba Ọkụ Akwa Awara Awara Okporo Ụzọ Eji Awara Awara Ụzọ awara awara